I-positive ye-DNA yedatha yedatha ngaphezu kokusombulula amatyala okubulala: uMartin Vrijland
Ewe, lonke elaseNetherlands likhululekile ukuba ityala likaNicky Verstappen laholela ekubanjweni kukaJos Brech. Ngaphambili, i-DNA yabangela ukuthunjwa kukaJasper Steringa kwimeko yaseMarianne Vaatstra, ngoko ke i-DNA yiphumo. Kukho nawuphi na okhokelela kwinkqubo entsha yezomthetho eyaqalwa yiqhawe likazwelonke likaPeter R. de Vries, elibizwa ngokuthi 'ilingo ngamacandelo'. Leyo yindawo yokuqala yokufumana inzuzo. Masibhekane nayo, kuvele nje ukuba i-Josh Brech iyona yecala lokubulala.
Ngokombono wam, iiyunivesithi kufuneka zibeke zombini imiba kwi-ajenda kwaye zibandakanye njengempahla yokufunda kwiintetho zabo. Ootitshala nabo kufuneka bafundise abafundi babo ukuba iNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente inokuphulaphula imithetho xa kuyimfuneko ngokusebenzisa iDNA ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Oko wavunyelwa kuJos Brech kwaye ngoko abafundi babone umzekelo omhle wendlela onokulungisa ngayo umgaqo ngokungawuthobeli umthetho.
Ukuba ufuna ukuba ngummeli kwaye ufuna ukufumana imali ephakamileyo yepokhethi, kufuneka ufunde ukugcina umlomo wakho uvale kwaye ungabikho into enjalo yezomthetho. Wena ungumdlali weqela eligalela ekwakheni ityala elitsha ngenkqubo yemidiya. Esi sidima ehloniphekileyo. Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga athwale ufunde iingxoxo indlela mbumbulu kunye phikisana TV kunye ngumgwebi TV uPetros R. de Vries, ukwenzela ukunika uluvo lokuba abe negqwetha elungileyo, kodwa ngoku ezinokuphazamisa kumboniseli evela tracks engalunganga zomthetho . Njengommeli kufuneka ufunde iindlela ezifanayo ze-NLP njengabaphathi abajongayo njengoJeren Pauw kunye nabadlali abafana noPeter R. de Vries. Umsebenzi omhle ukuba ube ngummeli we-PsyOp. Ngokuqhelekileyo ukhulula enye amanqatha uMercedes .
Unokufumana i-DNA kuyo yonke indawo kwaye unamathele kuyo yonke indawo, kuba unokwenza nje ukuba uyithathe kumntu. Emva kokuba unomntu we-DNA ungayibeka kwindawo yesehlakalo; ukuba unqwenela, ngaphantsi kweengubo okanye naphi na apho ufuna khona. Akunjalo ukuba oku kwenzeke kwimeko yeNicky Verstappen. Oko bekuya kuba yingcinga yoqhinga kwaye awufuni oko. Phela, kunokwenzeka kwakhona ukuba DNA ukwenza nawo, kodwa soze enze okusesikweni into ngokukhawuleza iba lixesha xa ngaba ilifa DNA wonke umntu. Nangona kunjalo, siqinisekile kwaye sinethemba. Ngokuqhelekileyo ungatsho ukuba kuyiluncedo ukuyeka iDNA yomntu wonke kwi-database yesizwe. Oku kunceda njengoko kwakuncedo ukuba nayo yonke iminwe nemifanekiso yabantu bonke. Ukuba umntu ufunyanwa ebulewe, konke okufuneka ukwenze kukufumana iDNA kwaye unomenzi wobubi. Yinto elula. Uyazi ukuba ngoku ndiyakwamkela?
Ukuba uphuze ikhofi nommelwane wakho, ngokuqinisekileyo i-DNA yakho kwindawo ethile kwisihlalo, itafile okanye indebe yekhofi. Ukuba ke loo ummelwane lwafumanisa iintsuku ezimbini efile kwaye ibekwe endlwini ukuze umzimba wakhe ifumaneka imeko epheleleyo yokubola (NFI iyenza nzima ukuba babonisa nokubulala okanye ukuxhatshazwa ngokwesini) kunokuba ntoni uPetros R. de Vries kuphela tweet nje : Sinalo! Ke ummeli wakho kuphela Jeroen Pauw kuza zosasazo ngeenjongo zokuya ntoni kwaye ephololoza malunga Ungcoliseko umnqamlezo, kodwa sele ucacile: Wena unguye umbulali ummelwane wakho; ingaba okanye abulawe. Ngaphandle koko, kunokubakho iifoto ezingabonakaliyo zabasetyhini ezifana nommelwane wakho kwi-PC yakho. Ezi zingu-100% ngokuqinisekileyo nazo zilandwe nguwe, kuba oorhulumente kunye nezobugwebi abanalo ilungelo lokubeka izinto kwi-PC yakho. Ewe, ngokwenene banaloo lungelo, kodwa ngokuqinisekileyo abanakuze benze njalo. Masize sikhuphe zonke iintlobo ezingenakucingeka. Masibe nethemba kwaye siqiniseke nge-DNA yedatafa yelizwe. Kuza kuza!
Kusenokwenzeka ukuba siye udlalwa umsebenzi psychological (PSYOP) kunye namatyala okubulala hyped apho umaphuli senziwa, kodwa jikelele sisakwazi ngokuthi ukuba i-DNA ye wonke nje luncedo. Unokuza kwisisombululo kuzo zonke iintlobo zemicimbi; nangona ujike okanye uyiphendule. Kwaye maxa wambi ufuna ukukwazi ukubeka into enzima kubantu ukuba awukwazi ukuwasebenzisa ngendlela eyahlukileyo. Kutheni na?
Ngendlela, ininzi yabantwana abangaphantsi kwe-18 sele ibalazwe i-DNA kuba iqela elijoliswe kuyo liye lahlutha isithende. Iiprofayili ze-DNA zihlambuluke kakuhle (kusekho ngokungekho mthethweni, kodwa kakuhle) kwi-RIVM ephantsi. I ezintle oku - ingqalelo okuhle ngokulinganayo - Ukuba umzekelo, wena Ndizakwenza yesiko sokugonya ngasinye umDatshi, ungakwazi isiko kufanelekile ukuba DNA zabo. Ngokomzekelo, ukuba unayo i-genetic predisposition to Alzheimer's, unokongeza umxube kwisitofu sokukhusela esiza kulungisa le ngcezu yeDNA. Oku kwenzeka ngenxa yokuba sazi indlela ye-CRISPR kwiminyaka ethile, apho ikhowudi ethile (ejongene naloo mfuzo) ingalandelwa kwaye ithathelwe indawo yikhowudi efunyenweyo. Umzekelo, wena abadala abantu abeza ukuba yonyaka isitofu sokugonya lwabo umkhuhlane enokwenziwa extra omncinane ukunikela sokugonya zabo, ukuze sifuze yabo Alzheimer kwakulungiswa nguwe. Lo uphuhliso oluhle! Yingakho ufuna ukuba wonke umntu abe neprofayili yeDNA! Ngokomzekelo, unokubanceda abantu abanomkhuba ogqithiseleyo wokucinga ngokuchanekileyo ngokwenza utshintsho oluthile. Ngokomzekelo, unokukunceda ukukhusela izifo zokuziphatha ezingenangqondo ngokusebenzisa iindlela zokugoma kwangaphambili. Lona lihle ithuba!
Ewe, ngoku umthetho ukuze usebenzise DNA kuphela uphando zomthetho kuphela kwaye kuphela uphando apho i-DNA sehle, kodwa ngethamsanqa ityala Nicky Verstappen wenza oku kungekudala pretty egudileyo zilungiswe. Kwaye ukuba izitofu ziba negunya kwixesha elizayo, unganika isipho esihle kwisitofu esinjalo. Oku kunjalo kufuna iigonti ezenziweyo, kodwa ukuba uyazi ngubani oza ekliniki, oko kulungile. Kulungile ukuba oko? Kukulungele kangakanani ukuba unokwenza nje ukuba ube ngabemi abahloniphekileyo ngokuhambelana nemigomo yokugoma. Ucinga ukuba izibalo zeGGZ kunye namanani olwaphulo-mthetho zibukeka njani ngaphezu kwe-10 iminyaka? Mkhulu! Eyona nto inomdla kwelizwe.
Ngokuqinisekileyo, unokwenza oku nje ngurhulumente. Emva kwakho konke, sele usufumene ubunikazi bomthetho bomzimba wabemi bakho ngokusebenzisa umthetho wequmrhu. Abantu banokukhetha nokuba ngaba bafuna ukuzidelela ukuze bazuze umnikelo, kodwa oko kwakungekho nkxalabo kuwe. Umzimba ngoku ulawulwa ngumthetho karhulumente. Kwaye oko kukugcina. Nenza oku ngokunxibelelana kwendlela kunye nezakhiwo, njlletera, ukuze wenze njalo kunye nemizimba yabemi bakho.
Idatha yedatha ye-DNA inikezela ngokucacileyo kwaye kufuneka sibe nethemba malunga naloo nto. Ngokuqinisekileyo uhlala unabo bacinga ukutshabalalisa abaqalayo malunga ne-Brave entsha yehlabathi yeBrave kunye nezinto, kodwa ziyi-pessimists. Ukuba unethemba lokuba uhlala ukhangelelanisa amathuba kwaye abanye bakushiye kwiingcamango eziphathekayo zezopolitiko ezikhethiweyo ngentando yenkululeko, ezikhonza kuphela injongo ye-1: ihlabathi elingcono kuwe!
Uludwe lwekhonkco lovimba: trouw.nl
UJos Brech ngu-100% umbulali kunye nomxhaphazi wezocansi kaNicky Verstappen kwaye kufuneka utyunjwe esidlangalaleni!
tags: databank, sedata, Dna, eziziimbalasane, Jos Brech, lonke, Marianne Vaatstra, UNicky Verstappen, UPeter R. de Vries
26 Septemba 2018 kwi-14: 40
Umzimba ngoku ulawulwa ngumthetho karhulumente "
Ngaba akunjalo kuphela xa uvakaliswa ufile? Okanye zizitho zombuso xa uvakaliswa ufile kwaye ungabonanga ukuba awuvumeli oku?
Ndiyabonga ngobugcisa bakho, kucacisa ukuba uyayilumkisa njani kwaye uyangqakraza ukuba kufuneka ube kunye / ukufaniswa nombuso kunye nayo yonke imithetho yayo. Ziya phambili kwaye ininzi enkulu iyimfama. Okanye omnye ucinga nje ukuba uninzi luyimpumputhe; oku kunika impembelelo efanayo ...
26 Septemba 2018 kwi-18: 03
Cinga ngalo mbuzo ...
Yiyiphi imeko esemthethweni ngoku? Ngaba urhulumente ungumnini wezitho zakho? Ngaba urhulumente ungumnini wakho wonke umzimba?
1 Oktobha 2018 kwi-09: 44
Amalungu athatyathwa kubantu abaye babulawa kwaye bayafa, banokukwazi ukuba nako. Kunjalo yonke inkqubo yokuvuna omzimba sele ufake isindululo, njengoko kucaca ukuba yempilo yomguli engaboni kakuhle yaye kungaphaya kwetu, nje ukuba aphile iiyure ezimbalwa. Kuphosakeleyo ukuthetha malunga 'nesihlobo esilandelayo', kuba isiguli asikafi. Ukufa kweBongo kuklanyelwe ukubulala umntu ukuba akukho misebenzi yengqondo ingalinganiswa kunye nezixhobo ezikhoyo. Kwixesha elidlulileyo, iivithamini zazingekho okanye ngenxa yokuba zazingabonakali. Ngoku bacinga ukuba bayazi yonke into kwisayensi, kodwa oko baziyo ngoku kungabikho kwiminyaka emininzi.
26 Septemba 2018 kwi-16: 15
Zosasazo odontodactylus 21-09 jl. Ingaba umdla kakhulu ingakumbi inxalenye apho Roethof ndinemivuyo "mna ngoku intloko .." iqhekeza NLP kwi okusemandleni alo, oko kwandenza ukrokrela kuphela ukwenza olomeleleyo ukuba ukubukela ' indawo yokuzonwabisa yabantu 'ilizwe apho ubuxoki buza kulahla khona
https://www.npostart.nl/pauw/21-09-2018/BV_101388634 (Ukususela kwi-16: 08)
27 Septemba 2018 kwi-19: 24
Ewe ngokukodwa ukuba loo pekoko ibhekiswe njani kwaye ikhuphe ngokukhawuleza ekukhuseleni.
26 Septemba 2018 kwi-20: 04
UThixo-wehlile, nonke kufuneka uqaphele ukuba inkqubo enhle kakhulu eqhutyelwayo oyiyingxenye?
Nceda undixelele, nguwe.
26 Septemba 2018 kwi-20: 51
Isithuba sam sokugqibela sasiqhaqhaqhazela, ngoku kwakhona.
Andinabantwana, kodwa i-DNA isele ihleliwe kuwo onke amaqashiso!
26 Septemba 2018 kwi-21: 28
26 Septemba 2018 kwi-21: 41
27 Septemba 2018 kwi-17: 07
urhulumente waseNetherlands kunye nomhlali walo ufukisele kwiifoto ezimbini ezinamandla:
"ABANTU ABAKHO BAZAKHULU. ABAKHO BAKHO BAKHUMBULWA KWEZIQONDO ZAKHE NGAPHAKATHI KWENKCAZISO NGOKWENZA UKUBA UKUFUNA. "
- U-Eric A. Blair (akaGeorge Orwell) ibhukumaka: 1984 (1949)
« Ubungqina bokuthi uGerald Roethof ubonakala ngathi ngummeli we-PsyOp kwimeko yeJos Brech
Amakhwenkwe ethu avimbele ukuhlaselwa okukhulu! Kuhle ukuba kukho amapolisa! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.963.342
UMartin Vrijland op Indoda enguTransgender izala umntwana weqabane elingelo-bhayibhile kunye nomntu onikelayo isidoda
iifom op Indoda enguTransgender izala umntwana weqabane elingelo-bhayibhile kunye nomntu onikelayo isidoda
Riffian op I-coronavirus evela eTshayina ibonelela nge-alibi efanelekileyo kwisibophelelo sokugonya kwihlabathi